Update New - Page 540 of 596 -
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ခန့် မှန်း
December 12, 2018 Naing 0
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ မုန်တိုင်းဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင် ခန့် မှန်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာ အားကောင်းသော လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်ပေါ်နေပြီး မုန်တိုင်းဖြစ်ရန် အလားအလာရှိနေကြောင်း ဒေါက်တာထွန်းလွင်က ဒီဇင်ဘာလ ၁၂ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက ခန့်မှန်းလိုက်သည်။ “ ကြီးမားတဲ့တိမ်တိုက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှာ မုန်တိုင်းဖြစ်ဖို့အလားအလာ ၂၀% ရှိနေပါတယ်။ လက်ကျန်တစ်လုံးတော့ […]
အမေ့ဗိုက်ထဲက သားလား? သမီးလား? မသိရသေးပဲ ငါ့သားသမီးလေးအတွက် ငါ ဒီထက်ပိုကြိုးစားတော့မယ်တဲ့ …
အမေ့ခံ_အတ္တသမားကြီး @ *အဖေက အရမ်းအတ္တကြီးတယ်အမေ <> အမေ့ဗိုက်ထဲက သားလား? သမီးလား? မသိရသေးပဲ ငါ့သားသမီးလေးအတွက် ငါ ဒီထက်ပိုကြိုးစားတော့မယ်တဲ့ … @ *အဖေက အရမ်းအတ္တကြီးတယ်အမေ <> လူလောကထဲရောက်လာစ သားသမီးလေးအတွက် နေကုန်အောင် အလုပ်တွေကြား ပင်ပန်းနေတာတောင်အနားမယူပဲ ငါ့သားသမီးလေးတွေကို ပုခက်ဆင်ပေးမယ်တဲ့ […]
နောက်ဆက်တွဲသတင်း – ခွေးဂေဟာတည်ထောင်သူဆရာဦးကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရ
နောက်ဆက်တွဲသတင်း – ခွေးဂေဟာတည်ထောင်သူဆရာဦးကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရ ပုဆိန်နဲ့ခုတ် တုတ်နဲ့ရိုက်သတ်တာလို့ သိရပါတယ်။မုဒုံမြို့နယ် တာပသွန် ကျေးရွာရှိ ၄င်း၏ ခွေးဂေဟာမှာဖြစ်သွားတာပါ။သေဆုံးသူ ဦးကြည်မိုးချစ်၏ DB ကို တာဝန်ရှိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ စစ်ဆေးပြီးနောက်မော်လမြိုင်လူမှုကယ်ဆယ်ရေး RESCUE အဖွဲ့မှ မုဒုံဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ မိတ်ဖက် ဖားအောက်အဖွဲ့မှလည်း လာရောက်ပူးပေါင်း ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။ […]
ဝေဠုကျော်နဲ့ ပက်သက်ခဲ့တာတွေကို မရှက်တမ်း အသေးစိတ်ထိ ဖွင့်ပြောလာတဲ့ သင်းသင်း
ဝေဠုကျော်နဲ့ ပက်သက်ခဲ့တာတွေကို မရှက်တမ်း အသေးစိတ်ထိ ဖွင့်ပြောလာတဲ့ သင်းသင်း မင်းသား ဝေဠုကျော်နဲ့ ပက်သက်ခဲ့သူ မသင်းသင်းမှ သူတို့နှစ်ယောက် စတင်ပတ်သက်ခဲ့မှုများကို မရှက်တော့ပါဘူးဆိုပြီး PannPwint မီဒီယာရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ အသေးစိတ် ဖွင့်ဟလာပါတယ်..။ ညီမကလည်း ညီမရဲ့ အပြစ်တွေကို ဖုံကွယ်မထားခဲ့ပါဘူး… မိုးတွင်းကာ […]
စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်၁၇နှစ်အထိ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးကို ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မိုးအောင်ရင်
စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်၁၇နှစ်အထိ ကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြီးကို ချမှတ်ခံခဲ့ရတဲ့ မိုးအောင်ရင် မိုးအောင်ရင်ကတော့ အနပညာလောကမှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာတစ်ယောက် အပါအဝင်ဖြစ်ပြီး ပြည်သူချစ်အနပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်ကို ရရှိထားတဲ့အနပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကိုအမြဲပြုံးပြနေတဲ့ မိုးအောင်ရင်ကတော့ မူးယစ်ဆေးအမှုနဲ့ အချုပ်ကျနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ မှာတော့ […]
လမ်းဘေးခွေးလေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဆရာကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရတယ်တဲ့ …
ကနဦးသတင်း – လမ်းဘေးခွေးလေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဆရာကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရ လမ်းဘေးခွေးလေးတွေကို ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဆရာကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရတယ်တဲ့ … သတင်းတခုကြားရတယ် စိတ်မကောင်းစရာအပြင် တကယ့်ကို နစ်နာတဲ့ ဆုံးရှုးမှုပါ။ ခွေးလေခွေးလွင့်တွေကို တာပတွန်မှာခြံအကျယ်ကြီးနဲ့ ခေါ်ယူစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ဆရာကြည်မိုးချစ် အသတ်ခံရတယ်လို့ ကနဦးသိရ ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရပါက […]
တောင်ကိုရီးယား တွင် လူဦးရေနည်းနေ၍ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ မဖြစ်မနေ ရည်းစားထားနေရ ဆိုးလ်ရှိ ဒေါင်ဂွတ်နှင့် ကွမ်ဟီတက္ကသိုလ်တို့က ချစ်မှုရေးရာဘာသာရပ်များ ပို့ချနေပြီး ယနေ့ခေတ်လူငယ်တို့သည် မိသားစုဘ၀ မထူထောင်လိုကြတော့သည့်အတွက် ၎င်းတို့ကို အဓိကရည်ရွယ်ကာ ယင်းဘာသာရပ်ကို ပို့ချနေခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ခြံမြေဈေးနှုန်းမြင့်မားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရရန် မလွယ်ကူခြင်းနှင့် ပညာသင်စရိတ်ကြီးမြင့်ခြင်းတို့ကြောင့် […]
စိမ်းလဲ့တင်အပန်းဖြေစခန်းကို နေခြည်ဦးအသက် (၃၀) ပြည့်ရင် လွှဲပေးတော့မယ့် သူမ မိခင်
စိမ်းလဲ့တင်အပန်းဖြေစခန်းကို နေခြည်ဦးအသက် (၃၀) ပြည့်ရင် လွှဲပေးတော့မယ့် သူမ မိခင် Beauty Blogger အဖြစ်နာမည်ကြီးလူသိများလာသူ နေခြည်ဦးဟာ သူမရဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်မှာ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်နေရုံမက အနုပညာလောကထဲကိုပါ တစတစနဲ့ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ၂ ကားကို ရိုက်ကူးပြီးသွားခဲ့ပြီးတော့ ရည်းစားဟောင်းဖြစ်သူ အောင်ရဲလင်းနဲ့ ရုပ်ရှင်တွဲရိုက်ဖို့လည်း […]
အသားခြောက်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ
အသားခြောက်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ အဆီပြန်ပြီးဝက်ခြံထွက်တဲ့သူရှိသလို၊ အသားခြောက်ပြီး ဝက်ခြံထွက်တတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အရေပြားဆိုတာ ကျွန်မတို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လို့ အသားအရေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သိပ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ နေရောင်ခြည်၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေ၊ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့် သင့်အသားအရေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပျက်စီးလာတတ်ပါတယ်။ ဝက်ခြံပြဿနာဟာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အသားလည်းခြောက်တယ်။ ဝက်ခြံလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ […]
အေးနေလို့ ပြန်နွှေးလိုက်ရင် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့ ဟင်း ( ၇ ) မျိုး (လူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်) အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေတာကြောင့် ပြန်နွှေးမစားသင့်တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မျိုး ကျွန်တော်တို့မှာ စားကြွင်းစားကျန်များကျန်ရှိလျှင် အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုရင် ၂ကြိမ်၃ကြိမ်နွေးပြီး ပြန်စားတတ်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်းပဲ တစ်ချို့ […]
« 1 … 539 540 541 … 596 »